» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग ७
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग ७
२४ चैत्र २०७६, सोमबार १६:२६
मकवानपुर, २४ चैत । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ अहिले चर्चामा छ । नेपालकै ठूलो भनेर दाबी गरिएको सिंगिङ रियालिटी शोको बुटवल अडिसनबाट केही प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका छन् । यस भिडियो सिरिजको सातौँ भागमा हामी बुटवल अडिसनबाट छानिएका थप ३ जना प्रतियोगीहरु रञ्जन पराजुली, सुनिल बस्याल र भुपेन्द्र थापा मगरका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
४) रञ्जन पराजुली– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि बुटवलबाट छानिएका चौथो प्रतियोगी हुन् रञ्जन पराजुली । सानैदेखि संगीत क्षेत्रमा लागेका रञ्जन बुटवल निवासी हुन् । हाल संगीत पनि सिक्दै गरेका उनी अध्ययन र संगीतलाई संगै अगाडि बढाउन चाहान्छन् । कलाकारिता क्षेत्रमा रहेका रञ्जनका बुवाले पनि उनलाई अगाडि बढ्न हौसला दिएको उनी बताउँछन् । उनी यस अघि नेपाल आईडलमा समेत सहभागी भएका थिए । अडिसनको सुरुमा ‘चाहान्छु तिमीलाई’ बोलको गीत गाएका उनले शब्द बिर्सिएपछि निर्णायकहरुले उनलाई पून गीतार नबजाई गीत गाउन दिएका थिए । सोही गीतबाट उनी दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
५) सुनिल बस्याल– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि बुटवलबाट छानिएका पाचौँ प्रतियोगी हुन् सुनिल बस्याल । सुर्खेत निवासी सुनिल अहिले बुटवलमा ईञ्जीनियरिङ अध्ययन गर्दैछन् । सानैदेखि संगीतमा रुचि राख्ने सुनिलले अध्ययनपश्चात सबै समयम संगीतलाई नै दिने गरेको उनी बताउँछन् । आमाबुवालाई संगीत क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणाका रुपमा लिने सुनिल विभिन्न स्टेज शोहरुमा पनि सहभागी हुने गर्छन् । उनी यसअघि नेपाल आईडलमा पनि सहभागी भएका थिए । उनले अडिसनमा ‘सयौँ जुनी पाउन’ बोलको गीत गाएका थिए । एउटै गीतमा निर्णायकहरुलाई लठ्ठ पारेका उनी दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका छन् ।
६) भुपेन्द्र थापा मगर– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि बुटवलबाट छानिएका छैटौँ प्रतियोगी हुन् भुपेन्द्र थापा मगर । यसअघि पनि नेपाल आईडल लगायतका विभिन्न गायन प्रतियोगिताहरुमा राम्रो प्रस्तुति दिईसकेका भुपेन्द्रका केही कभर गीतहरु पनि बजारमा आएका छन् । उनी भैरहवाका हुन् । अडिसनमा ‘परेलीमा’ बोलको गीत गाएका उनलाई स्टेजमै पुगेर निर्णायक रामकृष्ण ढकालले छनौट गरेका थिए । त्यसपश्चात अर्को गीत पनि गाउन लाएपछि भुपेन्द्रले ‘सपना भुलाई सारा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले दुबै गीतमा निर्णायकको मन जितेका थिए । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा पहिलो नेपाल स्टार को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।